कावासोतीको हिँउदे नगरसभा : रिङ्गरोड निर्माण प्राथमिकतामा, पार्किङ्ग व्यवस्थित वनाउन जोड – Mukundasen Television
कावासोतीको हिँउदे नगरसभा : रिङ्गरोड निर्माण प्राथमिकतामा, पार्किङ्ग व्यवस्थित वनाउन जोड
| २८ पुष २०७६, सोमबार १९:४५ , प्रकाशीत
दयाराम आचार्य , कावासोती, पुस २८
कावासोती नगरपालिकाले रि¨रोड निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । नगरपालिकाको सोमबार भएको हि“उदे नगरसभाले संसोधित विनियोजन ऐनले रिङ्गरोड निर्माणलाई प्राथमिकता दिदै बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नगर उप प्रमुख पे्रम शंकर मर्दनिया थारुले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन ऐनमा नगरपालिकाले रिङ्गरोडलाई प्राथमिकता दिदै रु ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाको महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा हेरीएको रिङ्गरोडलाई सम्पन्न गर्नकालागि वजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाको विकाशको आधारका रुपमा हेरीएको रिङ्गरोड कावासोती नगरपालिका ४ बाट निर्माणको काम यस अघिनै संचालन गरिएको भएपनी कार्यले गति लिन सकेको थिएन । हि“उदे अधिवेशनले वजेट संसोधन गर्दै रिङ्गरोडलाई प्राथमिकतामा पारेको नगर प्रमुख चन्द्र कुमारी पुनले बताउनुभयो ।
आफ्नो कार्यकालमानै रिङ्गरोड निर्माणलाई सम्पन्न गर्ने गरि कार्यसमेत अगाडी बढाईने उहा“ले बताउनुभयो । हिउदे अधिवेशनको सभाले पारित गरेको विनियोजन ऐनमा पा“च वटा वडाबाट काम गर्ने गरि रु. ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर १,३,११, १५ र १७ नम्बरवडामा यसै वर्ष रिङ्गरोडको निर्माण हुनेछ । नगरपालिकाले यस अघिनै रिङ्गरोड निर्माण गर्ने गरि डिपिआर समेत तयार गरिसकेको छ । सोही अनुसार अब भने एकै साथ पा“चवटा वडामा काम शुरु हुने भएको छ । यसै गरि सभाले कावासोती १६ गैंडाचोक देखि दक्षिण तर्फको बाटोका लागि रु. ३० लाख वजेट थप गरेको छ । यस अघि रु. १ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । नाला सहितको बाटो स्तोरन्तीका लागि रकम थप गरिएको छ । यस्तै मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स खरिदकालागि रु. ७ लाख अनुदान दिने , कुमारवर्ती बहुमुखी क्याम्पमा शौचाल निर्माणका लागि समेत वजेट विनियोजन गरिएको छ । यस अघि रु. ८८ करोड २६ लाख ७० हजार प्रस्तावित वजेट रहेकोमा सभाले संसोधित बजेट रु. १ अर्ब ११ करोड ७४ लाख ९४ हजार ३५१ पारित गरेको नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रोशन ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
सोमबार बसको सभाले आर्थिक ऐन २०७६मा समेत केही शंशोधन गरि पारित सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जसमा केही छुट भएका व्यवसाय तथा सिफारीसको कर निर्धारण गरिएको छ । आर्थिक ऐनले निजि पार्किङ्गलाई व्यवस्थित वनाउन शुल्क समेत निर्धारण गरेको छ ।
पार्किङ्गलाई व्यवस्थीत बनाउन आर्थिक ऐनले विशेष जोड दिएको छ । वेसमेन्ट पार्किङ्ग निर्माण गर्नेलाई घरनक्शा पास दस्तुरमा छुट दिने समेत निर्णय गरेको छ ।
सभामा बोल्ने सदस्यहरुले दिवा खाजाको रकम बढाउनुपर्ने, लागत सहभागिता नबुझाउनेलाई सेवा प्रदान गर्नरोक्नुपर्ने लगाएतका विषयहरु उठाएका थिए । सभामा उठेका विषयको उप प्रमुख पे्रम शंकर मर्दनिया थारुले जवाफ दिनुभएको थियो ।
सभामा नगर उप प्रमुख पे्रम शंकर मर्दनियाले पेश गर्नुभएको आर्थिक ऐनको शंशोधन प्रस्ताव र विनियोजन ऐनको शंशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मले पारित गरेको छ । सभाका बहुमत सदस्यले ध्वनीमतको आधारमा सर्वसम्मत रुपमा शंशोधित प्रस्ताव पारित गरेका थिए ।